Pamac 10.0 ichaunza kuvandudzwa kweManjaro package maneja | Linux Vakapindwa muropa
Pakati pevhiki isu tichataura nezvazvo Pacman 6.0, iyo Arch Linux package package uye zvigadzirwa. Ruzivo rwemberi rwakatanhamara urwo rwauchasanganisira zvichave kurodha pasi panguva imwe chete, izvo zvinoderedza nguva yekumisikidza. Nguva pfupi vhidhiyo isati yaitika iwe yaunayo mune ino chinyorwa kutaura nezvayo Pamac 10.0 uye zvinyorwa zvaro zvakatanhamara, asi zvakange zvisati zvaitika kusvikira vhiki ino kuti Manjaro veruzhinji pamasocial network.
Pano ndinoona zvakakosha kuyeuka mutsauko uripo pakati paPacman naPamac, pamwe nekuti haingave kekutanga nguva yekuti mumwe munhu ataure kuti chinhu chakarurama "Pacman" uye kuti "Pamac" chikanganiso Kwete. Pacman ndiye Arch Linux package maneja, seAPT, DNF kana YUM mune kumwe kugovera. Pamac ndizvo chishandiso graphical yekugadzirisa mapakeji kubva kuGUI software, saka tinogona kutaura kuti i "software centre". Nezve izvi zvatsanangurwa, pazasi iwe une vhidhiyo uye yakanyanya yakanakisa nhau iyo ichaunzwa muPamac 10.0.
Pamac 10.0 inosimbisa
Zvakawanda zvakagadziridzwa graphical interface.
Menyu kuruboshwe inonyangarika uye inotsiviwa neimwe ine yekudonhedza-pasi tabo kumusoro kwepamusoro.
Chikamu che "Rondedzero" chakabatanidzwa, nezvakawanda zvezvinhu izvo zvino zvakabatana pakati pehwindo. Ini pachangu, izvi zvinondiyeuchidza zvakawanda kuti zviri sei muGNOME software nzvimbo.
Bhatani idzva re "Refresh" muchikamu chekuvandudza.
Iyi "Software Mode" nyowani yakaunzwa iyo inotibvumidza kuona chete zvirongwa zvine tsananguro yakadzama, pachinzvimbo chekuona mapakeji acho ega. Izvi zvinogona kubatsira kusefa zvimwe zvemukati kana uchitsvaga zvekushandisa. Semuenzaniso, kana tikatsvaga "gimp" tichaona GIMP uye software inoenderana, yakadai seGlimpse, asi kwete plugins senge Resyntesizer kana BIMP.
Pamac 10.0 inoyambira panodiwa reboot mushure mekuvandudzwa, senge kernel.
Kunyange Manjaro kana munyori wevhidhiyo havana kumbobudirira apo Pamac 10.0 ichave iripo, asi zvinozivikanwa kuti yatove iri mune beta vhezheni uye izvo zvinogona kutorwa pasi kubva pane yazvino Pamac 9.x.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » Pamac 10.0 ichaunza kuwanda kwakawanda mune graphical chishandiso manejimendi Manjaro mapakeji
Debian 10.7 ikozvino yave kuwanikwa, inouya kazhinji iine kuchengetedzeka zvigamba